ဥပဒေပြုအမတ်များနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အစားအစာဘေးကင်းရေး အာရုံစိုက်မှု မြင့်တက်လာခြင်းသည် ကြက်ဥလုပ်ငန်းများအပေါ် ဖိအားများ သက်ရောက်စေသည်။ ဤအပြောင်းအရွှေ့သည် ထုတ်လုပ်သူများအား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဤစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် တွန်းအားပေးသည်။
အဆိုပါ SANOVO Grading စက် အတည်ပြုထားသော အစားအစာနှင့် ထိတွေ့ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဒီဇိုင်းထွင်တည်ဆောက်ထားပြီး၊ အဆင့်မြင့် သန့်ရှင်းရေးနည်းပညာကို အသုံးပြုကာ ကြက်ဥကို ခြေရာခံနိုင်စေရန် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။။ အဆိုပါ traceability software ဖြစ်ပါ သည်။ ကတီထွင် SANOVO. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က ကျွန်တော်တို မျိုးဆက်သစ်ကြက်ဥအတန်းအစားများကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ စတင် GraderPro 400 - 600 သို့ ကြက်ဥ စက်မှုလုပ်ငန်း။ ကြက်ဥတစ်လုံးတည်းကို ခြေရာခံနိုင်ခြေရှိသော ပထမဆုံးစက်များ “ဥတိုင်းတွင် တံဆိပ်တစ်ခု ရှိသည်”။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆက်ပေး အသေးစားနှင့်အလတ်စားအရွယ်အစား mကြက်ဥထုတ်လုပ်သူများအတွက် odels၊ ငါတို့အသစ်နှင့်အတူ GraderPro 75 - 22မိသားစု ၈၀၀၀ စွမ်းရည်သတ်မှတ်ချက်များမပါဘဲ ဆန်းသစ်သောကြက်ဥ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို သေချာစေရန်။
အသစ်ကနှင့်အတူ GraderPro အကွာအဝေး, ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဥတွေကို ခြေရာခံနိုင်စေတယ်။ ဘယ်ကလာတာလဲ။ အထုပ်၊ အိတ် သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ထဲသို့။ နှင့်အတူ GraderPro 75-220, ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူများသည် ထိရောက်သော၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ ဘေးကင်းသော ကြက်ဥအမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို သေချာစေသည့်နည်းပညာများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။
အဆန်းသစ်ဆုံး ကြက်ဥ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဖြေရှင်းချက်
နှင့် GraderPro စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မော်ဒယ်များ ကျွန်တော်တို့ ဖွံ့ဖြိုးတယ်။ အဆန်းသစ်ဆုံး ကြက်ဥ gradအဖွင် စက်မှုလုပ်ငန်း၌။ ဟိ GraderPro ပိုင်ရှင်များနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးမန်နေဂျာများသည် ၎င်းတို့၏ဥအဆင့်ကို စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းအသစ်အဆင့်သို့ မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးသည်။
အခု ကျွန်တော်တို့က အဲဒါကို နောက်တစ်ဆင့် တက်လှမ်းတယ်။ အ ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးရှိစွာ, စွမ်းရည်နိမ့် မော်ဒယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်။ ခေတ်မီနည်းပညာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ထိုအဖြစ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် GraderPro မော်ဒယ်များ, သေးငယ်သော အရွယ်အစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ရန် စမတ်ကျသော တိုးတက်မှုများ တစ်နာရီလျှင် ၇၅ မှ ၂၂၀ အထိ. စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းကြက်ဥ ပေးသွင်းသူဖြစ်ရန် လမ်းကြောင်းသည် ပေါင်းစည်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ GraderPro အောင်မြင်မှုအတွက် သင်၏ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် လုံခြုံသော၊ ခြေရာခံနိုင်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပရိုတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပေးဆောင်ပါ။ ကြက်ဥမှတဆင့်. It ထုတ်လုပ်မှုအန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေပြီး သေချာစေသော ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး သင့်လက်ရှိထုတ်လုပ်ရေးတွင် စမတ်ကျကျနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေသော အစားအစာဘေးကင်းရေးစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာသောကြောင့် အောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ရှေ့ကို ဆက်သွားပါ။ အ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ငါတို့ကအမြဲ ဖောက်သည်များနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံခြင်း။။ ဤ အနီးကပ်ထိတွေ့ခြင်း သေချာပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သင့်လျော်သော စက်များကို တီထွင်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူ.
အဆိုပါ GraderPro တည်ဆောက်ထားသည် ပို ergonomicစက်ဘောင်အမြင့်က အသစ်ကြောင့် နိမ့်တယ်။ ဆန့်ကျင်သည်။ တည်ဆောက်သည်။ ဤ အော်ပရေတာများအား ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရန် နည်းလမ်းကို ပေးသည်။
ဤစက်၏အန္တရာယ် is နိမ့်သောကြောင့် ရှိပါတယ် အတည်ပြု အစားအသောက် ထိတွေ့ပစ္စည်း (MCF)Cleaning In Place (CIP) နှင့် ခြေရာခံနိုင်မှု ဆော့ဖ်ဝဲလ်တို့ ပါရှိသည်။
ပင်မလမ်းကြောင်း၏သိပ်သည်းဆသည် နိမ့်သောအမြန်နှုန်းဖြင့် ကြက်ဥအများအပြားကို လည်ပတ်စေသည့် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်။ ရလဒ် ထိခိုက်မှုနည်းသည်။ တူညီသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောကြက်ဥအပေါ် အားလုံး၏ SANOVO သင်တန်းသား၊
ပြောင်းလဲ orientation မှ main track သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် track speed optimized handing ဖြင့် ပိုမိုထိရောက်မှု ပေးပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အ GraderPro 75-220 ဖြစ်ကြသည် ထုတ်လုပ်သော နောက်ထပ် ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးရှိစွာ လမ်း wအဲဒါကို စက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ အဲဒါက တတ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားအရွယ်အစား grader စျေးကွက်များ။
အဆိုပါ GraderPro 75-220 mအနံ့ စမ်းသပ်ပြီးနေကြသည် အကဲဖြတ်သည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာတွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး ထုတ်လုပ်သမျှ ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင် SANOVO TECHNOLOGY GROUP. စာမေးပွဲတွေအကုန်လုံး အပြီးသတ်၊ ငါတို့က စျေးသွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။